Olee otú iji wụnye Viber na kọmpụta ma ọ bụ laptọọpụ
N'agbanyeghi ngwa eji eji ohere nke Global Network, otutu mmadu kwa ubochi na-eziputa otutu ozi na faịlụ, tinyere ime oku na vidiyo site na iji ozi Viber. Ihe ngosi nke onye ozi ahu abughi ntakiri ya n'ihi obe ya, ya bu, ike ime ihe di iche iche na ndi oru ozo.
Hichapụ kọntaktị site na akwụkwọ adreesị Viber
Ihichapu akwụkwọ ndekọ adreesị Viber site na ntinye ajuju bu usoro di mfe. Nzọụkwụ a ga-ewe iji wepu klas kọntaktị na onye ozi ahụ arụnyere na ngwaọrụ Android, iPhone na kọmputa / kọmpụta na-agba ọsọ n'okpuru Windows ga-akọwa n'okpuru.
Ịwụnye Viber na nyiwe dị iche iche
Viber abughi otu n'ime mmemme kachasị amara maka ịgbanwe oku na ozi n'etiti ndị ọrụ si n'akụkụ ụwa nile. Onye ozi ahụ nwere nsụgharị maka nyocha niile a ma ama. Ntinye nke mbipute ọ bụla nwere àgwà nke aka ya, ya mere ụfọdụ ndị ọrụ nwere ajụjụ banyere mmejuputa usoro a.
Anyị na-echekwa ozi sitere n'aka Viber na gburugburu ebe obibi nke Android, iOS na Windows
Ọtụtụ ndị ọrụ Viber na oge iji zọpụta akụkọ ihe mere eme nke ozi zitere na nata n'oge ha nọ na ọrụ ahụ. Ka anyị tụlee ụzọ ndị ọkachamara na-ezipụ ozi na-atụ aro ka ha jiri mepụta akwụkwọ ozi na ndị Weiber na-eji ngwaọrụ eji Android, iOS na Windows.
Ịdenye akaụntụ bụ ọrụ bụ isi maka ịnweta ohere nke ọrụ ọ bụla Ịntanetị. Ihe na-esonụ na-atụle esemokwu nke ịmepụta akaụntụ na Viber - otu n'ime usoro mgbasa ozi kachasị ewu ewu dị ugbu a site na Global Network. N'ezie, usoro nke ịdenye onye ọhụrụ nke ọrụ ahụ kachasị mfe site n'aka ndị na-emepụta Viber.
Onye ozi ọ bụla ozugbo, ọbụna ụdị ọrụ dị otú ahụ, dịka Viber, n'enweghị ohere iji nweta aha na njirimara nke ndị ọzọ na-arụ ọrụ maka ịnye ha ozi, ga-agbanye n'ime ngwaọrụ ngwanrọ na-abaghị uru. Ya mere, ihe mbụ ndị ọrụ na-emekarị mgbe ọrụ akaụntụ ahụ gasịrị bụ ijuputa akwụkwọ ọrụ ekwentị ahụ juputara n'ime ngwa ngwa.
Ụzọ iji wụnye Viber ozi na iPhone
Viber cross-platform messenger na-ewe mpako nke ebe na ndepụta nke usoro ndị a na-emekarị ugboro ugboro na ngwaọrụ dị iche iche, tinyere Apple smartphones. Isiokwu a na-enye ọtụtụ ụzọ iji wụnye Viber maka iPhone, nke na-eme ka o kwe omume ngwa ngwa nweta ohere nke ọrụ ahụ n'ọnọdụ dị iche iche.
Esi meghee kọntaktị na Viber maka Android, iOS na Windows
Onye oji ojii na onye ozi Viber bụ n'ezie nhọrọ dị mkpa ma na-ewu ewu n'etiti ndị ọrụ. Enweghị ụzọ ọzọ iji mee ngwa ngwa na n'ụzọ dị irè ịhapụ ịnweta ozi site na ndị na-achọghị ma ọ bụ ndị na-ewe iwe na ọrụ Ịntanetị a ma ama, ma e wezụga maka iji igbochi àgwà ha.
Dị ka a maara, mmelite oge nke nsụgharị nke ngwanrọ ọ bụla bụ ọnọdụ dị mkpa maka ịrụ ọrụ nke ọma nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwa ngwa na ọrụ niile n'oge a, ọ bụ ezie na ngwaọrụ eji dị ka ngwà ngwaike na sistemụ arụmọrụ. Tụlee otú e si melite ọkachamara Viber ozi na ekwentị na-agba agba gam akporo ma ọ bụ iOS.
Imelite usoro Viber na kọmputa
Onye ozi Viber dị na ntanetị ọ bụla, gụnyere sistemụ arụmọrụ Windows. A na-emezi ihe omume ahụ mgbe niile, agbakwunyere ọrụ ọhụrụ, njezi nke mgbakọ ndị gara aga edozi. Ụfọdụ ndị ọrụ nwere ajụjụ metụtara emelite ngwanrọ a na kọmputa.
Hichapụ ozi na Viber maka gam akporo, iOS na Windows
Ihichapụ otu ozi maọbụ ọtụtụ site na nkata na onye ọzọ na Viber, na mgbe ụfọdụ, ozi ọ bụla nke na-eme na ozi ozugbo, bụ ihe na-ewu ewu n'etiti ndị ọrụ ọrụ. Isiokwu na-atụle mmejuputa mmekorita kwekọrọ kpọmkwem ọrụ ọrụ na Viber ahịa ngwa maka gam akporo, iOS na Windows.
Ohere maka mgbasawanye na-enweghị njedebe nke nkwurịta okwu nke ndị ozi nke oge a nwere ike iweta oge nkwụsị nke onye ọrụ ọ bụla na netwọk n'igwe ọ bụghị nanị na-enweta uru, kamakwa nsogbu ụfọdụ n'ụdị ozi achọghị ozi na mgbe ụfọdụ na-ewe iwe site n'aka ndị ọzọ so na ọrụ Ịntanetị dị iche iche.
https://termotools.com ig.termotools.com © Viber 2020